Vondrona SMTP : katsaka 25 t sy kidoro 200 alefa any atsimo | NewsMada
Vondrona SMTP : katsaka 25 t sy kidoro 200 alefa any atsimo
Nampahafantarina omaly, tetsy amin’ny SMTP Ambohibao ny fanampiana entin’ny vondron’orinasa SMTP ho an’ny kaominina Antanimora any amin’ny faritra Androy. Nandefa avy hatrany katsaka milanja 25 taonina sy kidoro 200 isa ary loko ny vondron’orinasa, ho an’ny mponina tratran’ny kere any amin’ity kaominina ity.
Nilaza ny filoha tale jeneralin’ny SMTP, Danil Ismael, fa horaisin’ny mompera ao amin’ny fiangonana katolika an-tanana ny fitsinjarana ny fanomezana. Handokoana ny fiangonana kosa ny loko.
“Maina ny tany, tsy misy ny vokatra tena noana ny olona any Antanimora ka rariny loatra raha andefasana fanampiana izy ireo”, hoy hatrany ny filoha tale jeneraly. Mitaky vahaolana maharitra iny faritra izay tokony hojeren’ny fanjakana akaiky.
Soso-kevitra naroson’Atoa Danil Ismael ny tokony hisarihana ny rano avy ao Fort Dauphin amin’ny alalan’ny toho-drano ka mitarika ny rano any Androy manondraka ny tany sy mamatsy ny olona any an-toerana. Hanafoana tanteraka ny kere miseho isan-taona ary mampijaly ny mponina any atsimo izany.
Tetsy andaniny, nilaza ny zanak’Antanimora, Makamasy George fa tsy midina be ny vidin’omby any Androy, satria lasa manao varoboba ny biby fiompiny ny mponina vokatry ny hanoanana mivaivay. Nisaotra ny vondrona SMTP ny zanak’Androy tamin’ny fanampiana nentin’izy ireo ho an’ny mponina any an-tanàna.